Ogaden News Agency (ONA) – Xafladi Sanad Guurada JWXO oo ka dhacday Sandiego
Xafladi Sanad Guurada JWXO oo ka dhacday Sandiego
Axad, September 02, 2012: waxaa magaalada San Diego ee gobolka California oo ah cariga maraykanka ka dhacay xaflad aad loosoo abaabuley oo ay kasoo qayb galeen shacab aad u tiro badan.
Dadkaa goobta isugu imaaday ayaa waxaa kamid ahaa dhalinyaro, odayaal, dumar iyo ciyaal. Waxaa xafladan goobjoog ahaa ururo badan oo ay kamid ahaayeen ururka OYSU fariciisa San Diego oo iyagu soo abaabuley xafladaan, waxaa kaloo goob joog ahaa ururka haweenka Ogadenia iyo dhamaan qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Somalida Ogadenia.
Xafladaan oo lagu xusayay sanad guuradii 28aad ee kasoo wareegtey aas aaskii JWXO. Waxaa goobta lagusoo bandhigay kudbado iyo wacdi diini ah oo meela badan taabanaya.
Goobta xafladaan lagu qabtay oo ahayd Hotel weyn oo layidhaah Holyday inn oo kuyaala magaalada San Diego ayaa sidii caadada ahayd waxaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka iyo wacdi uu soo jeediyay Sheekh Xuseen.
Waxaa kaloo khadka lagu soo xidhay oo shacabkii halkaa isugu imaaday khudbad muqaal ah usoo jeediyay Mudane Cadaani Hiirmooge , wuxuuna si lama ilaawaan ah u dhiiragaliyay shacabkii goobta joogay oo uguna baaqay inay Ethiopia burburayso fursadna aan hada uhaysano inaan helo xoriyadeena inshalah.
Waxyaabihii halkaa lasoo bandhigay oo aan lasoo koobi Karin ayaa waxaa kamid ahaa majaajolooyin, heeso wadani ah iyo dhaanto ay soo ban dhigeen fanaaniinta iyo abwaaninta ururka OYSU ee San Diego.
Marnaba waxaan la iloobin Karin oo goobtaas hadal dheer ka jeediyay nin kasocdey xafiiska Bob Filner oo ah ninka usharaxan duqa magaalada San Diego , hadana ah xubin katirsan congreska maraykanka oo laga soo doortey san diego. Wakiilka kasocday xafiiska Bob Filner ayaa sheegay hadii ay somalidu codkooda ugu shubaan doorashada soo socota ee bisha November uu waxyaabo badan kacaawin doono bulshada somaliyeed ee kunool magaalada San Diego.